उडेको ३ मिनेटमै सीता एयरको एउटा इन्जिन फेल, सकुशल काठमाण्डौ अवतरण
काठमाण्डौ । उडेको ३ मिनेटमै एउटा इन्जिन बन्द भए पनि पाइलटले सीता एयरको विमान सोलुखुम्बुको लुक्लाबाट बुधबार बिहान काठमाण्डौको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गराएका छन् । डबल इन्जिनको सीता एयरको ९–एन–एजेएच विमान लुक्साबाट बिहान ८ः२१ मा उडेको थियो उडेको ३ मिनेटमै विमानको एउटा इन्जिनमा समस्या देखिएको थियो । तर...
यात्रु कम भएपछि एनएसीको जापान उडान अब दुई दिनमात्रै
काठमाण्डौ । जापानको ओसाका सिधा उडान शुरु गरेको नेपाल वायुसेवा निगमले साताको दुई दिनमात्रै उडान भर्ने भएको छ । वाइड बडी जहाज भित्र्याएको एक वर्षपछि लामो गन्तव्यमा पहिलो पटक यही भदौ १२ गतेदेखि जापान उडान भरेको निगमले तत्काललाई यात्रुको सङ्ख्या कम रहेको भन्दै जापानमा उडान तालिका घटाएको हो । निगमले अव सातामा मङगलबार र शनिबार मात्र उडान...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट दैनिक ७ घन्टा बन्द
काठमाण्डौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज आइतबारदेखि चार महिनाका लागि दैनिक सात घन्टा बन्द हुने भएको छ । यसअघि नियमित ३ घन्टा बन्द हुँदै आएको नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रो चरणको स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन दैनिक सात घन्टा बन्द हुने भएको हो । विमानस्थल अधिकारीहरुका अनुसार पुस १५ गतेसम्म राति ११ बजेदेखि...
नेपाल एयरलाइन्सको उडान बन्द, यात्रु मर्कामा
मुगु । गत वैशादेखि बिनाजानकारी नेपाल एयरलाइन्सले मुगुको रारा विमानस्थलमा उडान बन्द गरेपछि यात्रु मर्कामा परेका छन् । विसं २०६३ असार १३ गते मुगुको रारा विमानस्थलमा सफल परीक्षण उडान गरेर नेपालगञ्जदेखि नेपाल एयरलाइन्सको ट्वीनअटर विमानले हप्तामा नियमित दुई उडान गर्दै आएको भए पनि गत वैशाखदेखि बिनाजानकारी उडान बन्द गर्दा यात्रु मर्कामा...
काठमाण्डौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चार महिनासम्म दैनिक ७ घन्टा बन्द हुने भएको छ । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रो चरणको स्तरोन्नतिको कामका लागि आउँदा भदौ १५ गतेदेखि दैनिक ७ घन्टा बन्द हुने भएको हो । विमानस्थलका अधिकारीहरुका अनुसार पुस १५ गतेसम्म स्तरोन्नतिको काम हुनेछ । जसका लागि राति साढे ११ बजेदेखि...
फाप्लु विमानस्थलमा चिनमा निर्मित विमानको परीक्षण उडान
सोलुखुम्बु । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाई१२ई’ जहाजले सोलुखुम्बुको फाप्लु विमानस्थलमा परीक्षण उडान भरेको छ । चिनमा निर्मित उक्त विमानले आज पहिलो पटक सफल परीक्षण उडान भरेको हो ।चौध सिट क्षमता भएको उक्त जहाजले ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा पनि आजै उडान भरेको निगमका ‘अपरेशन डाइरेक्टर’ एवं ‘क्याप्टेन’ दीपुराज ज्वारचनले जानाकारी...
वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन नेपालीले गर्न नसकेपछि विदेशी ल्याउने तयारी
सिबी अधिकारी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यवस्थापन सञ्चालन करारमा दिने तयारी गरिएको छ । निगमको हालको व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त हुन नसक्दा उडान सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै निगमले व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको हो । निगमले विशेषगरी मुख्य तीन विभाग ‘अपरेशन’,...
कराची । पाकिस्तानले मंगलबार सबै प्रकारका नागरिक उडानहरुका लागि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पुनः खुला गरेको छ । पाकिस्तान र भारतबीच उत्पन्न तनाबका कारण पाकिस्तानले भारत समेत सबै मुलुकका गैरसैनिक बिमानको पाकिस्तानी आकाश हुँदै उडानहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ले सबै प्रकारका गैरसैनिक उडानहरुका...
यती एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा चिप्लियो
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सको विमान शुक्रबार बिहान अवतरणका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा चिप्लिएको छ । नेपालगञ्जबाट यात्रु बोकेर आएको यती एयरलाइन्सको एटीआर–७२ को जहाज बिहान करिब ११ बजेर ५ मिनेटमा अवतरण गर्नेक्रममा धावनमार्गमा चिप्लिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अधिकारीहरुका अनुसार...
आकाशमा एक्कासि विमान हल्लिँदा ३५ यात्रु घाइते
काठमाण्डौ । क्यानडाको भ्यान्कुभरबाट बिहीबार अस्ट्रेलियाको सिड्नीतर्फ उडिरहेको एअर क्यानडाको विमान ३६ हजार फिटको उचाइमा अचानक हल्लिन थालेपछि त्यसमा सवार ३५ यात्रु घाइते भएका छन् । उडान भरेको २ घन्टामै विमान टर्बुलेन्स (हावाको तापक्रमले उत्पन्न हुने अवस्थामा) मा फसेको थियो । टर्बुलेन्सका कारण विमान हल्लिन थालेपछि ३५ जना यात्रु...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : तीन महिनापछि आजदेखि २१ घण्टा नै सञ्चालनमा
काठमाण्डौ । विगत तीन महिनादेखि दैनिक १० घण्टा बन्द हुँदै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सोमवारदेखि पूर्ववत् रूपमै सञ्चालनमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तीन हजार मिटर लामो धावनमार्गमा नयाँ कालोपत्र गर्ने काम सकिएसँगै दैनिक २१ घण्टा नै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ। विमानहरू उड्नुअघि प्रयोग गर्ने मार्ग...
सुर्खेत : सुर्खेतबाट बुद्ध एयरको सन्ध्याकालीन उडान हटाइने भएको छ। असार १ गतेदेखि शुरु भएको सन्ध्याकालीन उडान यात्रु अभावमा हटाइने भएको हो। काठमाडाँैका लागि बिहान र साँझ दुईपटक उडान गर्ने भनेको बुद्ध एयरले यात्रु अभावका कारण उडान शुरु भएको एक हप्ता नहुँदै असार ६ गतेदेखि सन्ध्याकालीन उडान हटाउने भएको बुद्ध एयरका सुर्खेत इन्चार्ज अनिल...
रु. ४५ हजारमै जापान उड्न पाइने !
-सिवी अधिकारी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी जहाजबाट रु ४५ हजारमै जापानको यात्रा तय गर्न सकिने भएको छ । आगामी असार १९ (४ जुलाई, २०१९) देखि जापानको ओसाका सिधा उडान भर्ने तयारी गरेको निगमले काठमाडौँ–ओसाका उडानको भाडा निर्धारण गरेको हो । जसअनुरुप एकतर्फी ४५ हजार र दुईतर्फी भाडा ७७ कायम गरिएको छ ।...
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ विमानस्थल सुधारका काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । विदेशीको पहिलो प्रभाव पर्ने विमानस्थल नै भएकाले बुटिकको अवधारणाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको भित्री तथा बाहिरी सुधारका काम धमाधम भइरहेको छ । नेपालको परम्परागत, कला र...
बंगलादेश एयरलाइन्समा चरम श्रमशोषण, २६ वर्षदेखि काम गर्नेको तलब मात्र ५ हजार !
काठमाडौं । विमान बंगलादेश एयरलाइन्सले विगत नौवर्षदेखि काम गर्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई महिनाको जम्मा ३५ सय तलब दिन्छ भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर यो वास्तविक कुरा हो । देवी थापा, जो विगत नौ वर्षदेखि विमान बंगलादेश एयरलाईन्समा काम गर्दै आएकी छिन् । उनको मासिक तलब जम्मा पैंतिस सय रुपैंया रहेको छ । त्यो पनि पेट्रोल खर्च भनेर थपेर...